I-NFC: Eduzane Nenkambu Yezokuxhumana kanye Nokumaketha
ISonto, May 8, 2016 NgoMsombuluko, Juni 25, 2018 U-Adam Encane
I-mobile landscape iyaqhubeka ngokuqhubekayo, futhi kuphela abathengisi abahambisana nezinguquko futhi abazifaka kumasu abo wokuphromotha nokuzibandakanya abeka ithuba lokuphumelela ezweni lanamuhla elincintisana kakhulu.
Ubuchwepheshe bamuva bokwenza kube bukhulu yi-Near Field Communications (NFC).
Kuyini i-Near Field Communications?
I-Near Field Communications ubuchwepheshe obunamathele kumadivayisi eselula akamuva avumela ukuxhumana okuphephile (ngesiqinisekiso) phakathi kocingo lweselula nedivayisi yokudlulisa. I-NFC ivumela izivakashi ukuthi zihlole ngokujulile, ukubuka imidiya enothile eyenziwe ngokwezifiso, ukuthola okunikezwayo okukhethekile okubhekiswe kukho, ukwabelana ngokuhlangenwe nakho futhi okubaluleke kakhulu, ukuthenga, konke ngokusebenzisa ama-smartphones abo.
I-NFC ingukuthuthuka okukhulu kunamakhodi we-QR. Amakhodi we-QR adinga ukulanda uhlelo lokusebenza nokulayisha ikhodi yebha ukufinyelela kokuqukethwe okudlula ikhasi lewebhu. I-NFC ivumela abasebenzisi beselula ukuthi bafinyelele kokuqukethwe okunothile futhi bahlanganyele nomkhiqizo ngokukhululekile. Konke umsebenzisi okumele akwenze ukuthepha i-smartphone kunoma iyiphi iphosta efakwe kwi-RFID, isikhangiso sikamagazini, indawo yokuthengisa noma enye into yokuphromotha, ukuthola ukufinyelela okusheshayo ezweni lezindaba ezicebile nokuqukethwe.
Kumthengisi, lokhu kusho hhayi nje ukuxhumana nokuzibandakanya nezivakashi kangcono, kepha nethuba lokuthwebula nokuziphatha kwezivakashi nezinto ozithandayo ngesikhathi sangempela emhlabeni wangempela. Iqiniso lokuthi lobu buchwepheshe buhlanganisa nokukhuthazwa nendawo yokuthengisa, ngaleyo ndlela kuvumele izivakashi ezinentshisekelo ukuthi zenze ukuthenga ngokushesha kungavele kwenze lokhu kube yindawo engcwele yabathengisi ezinsukwini ezizayo.
Ubuchwepheshe be-NFC bungasetshenziselwa ukukhomba, ukufaka ithikithi, isikhathi nokuhambela, ukwethembeka nezinhlelo zobulungu, ukufinyelela okuphephile (ngokomzimba noma ngedivayisi) noma ukusetshenziswa kokuhamba - ngaphezu kokucutshungulwa kwenkokhelo. Njengoba nje siqapha izindlela nemisebenzi ku-inthanethi, indawo izokwazi ukuqapha izindlela nezinto ezenziwa ungaxhunywanga - mhlawumbe ukuthola amagoli nokuvuza ukusebenza kwabasebenzisi babo be-NFC. UThinaire unikeze le vidiyo ekhuluma ngezinye izindlela ezengeziwe izinkampani ezingasebenzisa ngazo ubuchwepheshe:
I-Google isivele yethule i-Google Android ngamakhono we-NFC, futhi sonke esinye isidlali esikhulu seselula sesilandele noma sesimemezele ukukhishwa kwe-NFC kungekudala.
Uma une-Google Android enamandla we-NFC, vakashela ifayela le- Isitolo se-Google Android. Uma ungunjiniyela, iGoogle ikhiphe lokhu okuningiliziwe ividiyo ku-NFC ukuthuthukiswa.
Thwebula Eduze Kwenkundla Yezokuxhumana Zamaduma ngokubheka ngokuphelele i-NFC. Thola:
Okufunwa ngabathengi namuhla, ikakhulukazi lawo millennials okunzima ukuwaqonda
Ungakwenza kanjani ubuciko bokuhlangenwe nakho okuphathekayo kanye nemikhankaso yokukhangisa ukushayela imali nokwethembeka komkhiqizo
Yimaphi amacala okusizakala azuzisa kakhulu kubunikazi bomkhiqizo wedijithali nasekufakeni okuhlakaniphile
Ukuqalisa okulungile kungakuthuthukisa kanjani ukwethembeka komkhiqizo futhi kuqhube ukuhweba ngamaselula
Ungayisebenzisa kanjani amandla okwenza ngokwezifiso wefu ukunika amandla ukumaketha kokuqukethwe okufinyelela kumakhasimende amasha nokugcina amakhasimende amanje ejabule
Ungaqala kanjani kwimikhankaso yakho ye-omnichannel usebenzisa i-NFC njengobuchwepheshe obuphakathi nendawo
Landa i-Near Field Communications yamaDummies
Tags: Ukufinyelelaukufikaukukhokha ngaphandle kwemalii-google androidi-google walletukuhlonzaloginukucubungula inkokhelo yeselulaizinkokhelo zeselulaubuchwepheshe beselulaeduze nokuxhumana kwensimunfciphuzu lokuthengisaukufinyelela okuphephilenokuvikelekaizinkokhelo ze-smartphonethinaireUkunikezwa ithikithiisikhathi nokuba khona
Ijika Elihle Lokulinganisa Lokugcina Komsebenzisi Lokusebenza Kweselula